IMarketingng Archives-Funda ukuRhweba
Uniswap (UNIUSD) Ixabiso: Ukujikeleza kweMovement kunokuthi kuqhubeke njenge-$27 kunye ne-$21 yeNqanaba lokubamba
Ukuhlaziywa: 4 Novemba 2021
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap – nge-04 kaNovemba
Xa iinkunzi zenkomo zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokumelana ne- $ 27, ixabiso liya kunyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 30 enokuthi inyuke iye kwinqanaba le- $ 37. Kwimeko apho iibhere zonyusa uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 21, amaxabiso angaguqukiyo anokuhla aye kuthi ga kwixabiso lamaxabiso angama- $ 17 kunye nama- $ 14.
Intengiso yeUNI / USD
Amanqanaba okumelana: $ 27, $ 30, $ 37
Amanqanaba enkxaso: $ 21, $ 17, $ 14
I-UNI / i-USD yexesha elide iTrend: Ukurola
Uniswap ukwimowudi eqalayo kwimbonakalo yexesha elide. Abathengi batyhala i-Uniswap ukuvavanya izinga lokumelana ne-$ 27 ekuqaleni ngo-Oktobha 01. Inqanaba lokumelana ne-$ 27 libamba ixabiso. Ukusukela ngoko, uxinzelelo lwabathengi lubuthathaka kwaye alukwazanga ukuqhekeza inqanaba lexabiso le-27 yeedola. Umfutho weebhere ubonakala uphantsi kwaye awukwazanga ukuphula inqanaba lenkxaso ye-21 yeedola. Ixabiso liphakathi kwe-$ 27 kunye ne-$ 21 amanqanaba exabiso okwangoku.
Uniswap itshathi yemihla ngemihla, ngoNovemba 04
Uniswap uthengisa ngapha nangapha ezi EMA zimbini nto leyo ebonisa isantya esijikelezayo, kwakhona umndilili ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) ahlala enxibelelene nomndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Xa iinkunzi zeenkomo zifumana uxinzelelo olungakumbi lokuqhawula izinga lokumelana ne-$ 27, ixabiso liya kunyuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 30 enokwandisa kwizinga le-$ 37. Kwimeko apho iibhere zonyusa uxinzelelo lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-21 yeedola, ixabiso le-Uniswap linokuncipha ukuya kwi-17 yeedola kunye ne-14 yexabiso lexabiso. I-Relative Strength Index igoba kumanqanaba angama-60 abonisa uphawu lokuthengisa.
I-UNI / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: UkuHamba
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyahluka. Ukukhula kweebhere kuya kuba buthathaka xa ixabiso lifikelele kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 21. Inqanaba alinakwaphulwa phantsi kwaye inqanaba lokumelana ne-27 yeedola libonakala lomelele kunamandla akhulayo. Ukungatshintshi kukufumana intshukumo yokudityaniswa okwangoku.
Uniswap itshathi yeeyure ezi-4, ngoNovemba 04
U-Uniswap ujikeleza phezu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla ahambelanayo 14 lingaphezulu kwamanqanaba angama-50 ukugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
tags Marketilysis, Intengiso, Ubugcisa ana, I-UNIUSD